सडकको लापरबाहीले गैँडा मर्‍यो : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज – Nep Stok
माघ १०, २०७८ सोमबार 151
१० माघ, चितवन। वन्यजन्तु करिडोरमा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले सडक विस्तारको काम गर्दा गैँडा मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । सडक विस्तार गर्दा गर्नुपर्ने आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले काम गराउँदा गैंडा मरेको हो ।
घटनास्थलको प्रतिवेदन आज पेश भएसँगै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर घटनाको अध्ययन सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । निकुञ्जले सडकलाई पत्र पठाउँदै छ । वन क्षेत्रमा नाली किन आवश्यक पर्‍यो ? सो विषयमा अध्ययन गर्न थालिएको उनको भनाई छ। शहरी क्षेत्रको पानी वन क्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो वा के हो ? यस विषयमा बुझ्ने उनले बताए ।
Prevबालुवा निकाल्ने क्रममा दुई मजदुरको मृत्यु, प्रहरीलाई जानकारी दिइएन
Nextघरमा राख्नुहोस् मात्र यो चीज, नकारात्मक उर्जा नष्ट भइ हुन्छ धनको वर्षा